Resident and Tenant Registration Announcement
We would like to remind residents that, as one of the preventive measures of Covid-19 and safety, the Management encourages all owner-occupiers and tenants to update the family registration by 30th November, 2020. Please refer to the attached file at the end of this announcement; the following information is mandatory and we will be issuing resident ID cards:
Your basic family information as previously requested (if you have already provided the information – thank you.)
Passport size photo (white background) – simple phone photo is sufficient.
Please make sure your driver, helper and nanny are registered as well under your household.
Please also note that owners need to inform the Estate Management office / customer service office whenanew tenant moves in. The new tenant / resident will be required to fill inahealth & travel declaration form before proceeding to occupy the unit. Pun Hlaing Management is working hard to minimise the risk of infection within the Estate. We seek your understanding and look forward to your cooperation.
Let’s be vigilant and work together to keep our Estate safe.
Should you require any assistance please contact our email our Estate Management.
လေးစားအပ်ပါသော ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။
Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ အိမ်ငှားများအနေဖြင့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်မှတ်ပုံတင်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။ အသိပေးကြေညာစာအဆုံးတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ ပါရှိပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် သက်သေခံကတ်ပြားကို ရရှိရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။
ယခင်ကတောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း အခြေခံ မိသားစုအချက်အလက်များ ကိုဖြည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဖြည့်သွင်းပြီးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)
ပတ်စ်ပို့ဆိုဒ် ဓာတ်ပုံ (အဖြူရောက်နောက်ခံဖြင့်) ကိုပါတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ထားသည့် ပုံဖြစ်လျှင်လည်း လက်ခံပေးပါသည်။
မိမိအိမ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ယာဥ်မောင်းများ၊ အိမ်အကူများ၊ ကလေးထိန်းများကိုပါ အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းမှတ်ပုံတင်ပေးကြပါရန် အသိပေးလိုပါသည်။
အိမ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အိမ်ငှားအသစ်လာရောက်နေထိုင်မှုရှိပါက Estate Management office (သို့မဟုတ်) Customer Service office သို့ အကြောင်းကြားပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ငှားအသစ်၊ နေထိုင်သူအသစ်အနေဖြင့်လည်း အိမ်အသစ်တွင်နေထိုင်ပြောင်းရွှေ့မှုမပြုလုပ်ခင် ကျန်းမာရေးနှင့်ခရီးသွားလာမှုမှတ်တမ်းဖောင်ကို ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းကို ဆက်လက်ပြီး စိတ်ချလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ရန် အတူတကွ နိုးနိုးကြားကြားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ပါက အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အီးမေးလ်ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။